May 11, 2019 - MM Live News
ပဲခူးမြို့ အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်တော်မပုပ်မသိုးသည့်အပြင် ကိုယ်ငွေ့အပူချိန်တိုးလာခြင်း၊ ဆံပင်၊မုတ်ဆိတ်များ ထွက်လာခြင်း…
May 11, 2019 MM Live
ပဲခူးမြို့ အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်တော်မပုပ်မသိုးသည့်အပြင် ကိုယ်ငွေ့အပူချိန်တိုးလာခြင်း၊ ဆံပင်၊မုတ်ဆိတ်များ ထွက်လာခြင်းတို့ကြောင့်အန္တိမအဂ္ဂိ ဈာပနမပြုဘဲ ထာဝရပူဇော်ထားရှိမည် Saturday, May 11, 2019 ပဲခူးမြို့၊ ဗိုလ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီးဘဒ္ဒန္တစန္ဒိမာ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အား အန္တိမအဂ္ဂိဈာပန မီးသဂြိုဟ်ခြင်း မပြုလုပ်တော့ဘဲ ရုပ်တော်အတိုင်း ထာဝရပူဇော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဈာပနတော် ကျင်းပရေးကော်မတီထံမှ သိရသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် ဧပြီ ၂၇ ရက်၊ ည ၁၁ နာရီက ရန်ကုန်မြို့၊ အာရှတော် ဝင်ဆေးရုံတွင် ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူ ခဲ့ပြီး မေလ ၅ ရက်တွင် အန္တိမအဂ္ဂိဈာပန ကျင်းပရန်စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း ဆရာတော်ကြီး၏ ကျန်ရှိရုပ်ကလာပ်မှာ….. ထူးခြားနေသောကြောင့် မေ ၅ ရက်တွင် ကျွမ်းကျင် ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် စမ်းသပ်ကြည့်ရာ၌ ကိုယ်ခန္ဓာအပူချိန်သည် ၁၃ ဒီဂရီအထိ […]
တစ်ယူနစ် ကျပ် ၁၀၀ အထက်ပေးပါက မီးမပြတ်ဘဲလုပ်ပေးမည့် ကုမ္မဏီများရှိဟု ဝန်ကြီးချုပ်ပြော…..
တစ်ယူနစ် ကျပ် ၁၀၀ အထက်ပေးပါက မီးမပြတ်ဘဲ စိတ်ကြိုက်သုံးနိုင်အောင် လုပ်ပေးမည့်ကုမ္မဏီများရှိဟု ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား လျှပ်စစ် တစ်ယူနစ် ကျပ်၁၀၀ အထက်ပေးနိုင်မည်ဆိုပါက မီးပြတ်တောက်မရှိဘဲ စိတ်ကြိုက် သုံးစွဲနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ များ ရှိဟု ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းမှ မေလ၁၀ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း ရှိ Lotte Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (Yangon lnvestment Forum 2019) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား တွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ” လျပ်စစ် တစ်ယူနစ်လျင် ကျပ်၁၀၀ နှင့် အထက် ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် မီးပြတ်တောက်မှု့ မရှိဘဲ စိတ်ကြိုက် သုံးစွဲနိုင် အောင် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မယ့် ကုမ္ပဏီ တွေရှိပါတယ် […]
ဖုန်းလွတ်​ကျပြီး မှန်​ကွဲ​သွားလို့ ဖုန်းပြင်ဆိုင်သွားလိုက်သောအခါ …..
May 11, 2019 May 11, 2019 MM Live
တ​စ်​​နေ့က​ပေါ့ ဖုန်းလွတ်​ကျသွားလို့ မှန်​မကွဲ​လေးက အပ်​ရာထင်​သွားတယ်​ ဒါနဲ့ပဲ …..ဖုန်းဆိုင်​မှာ သွားပြီး အသစ်​လဲမလို့အသွား ရိုးသားလှတဲ့ သာမာန်​အလုပ်​သမား ​တောသူ​တောင်​သား သားအမိနှစ်​​ယောက်​နဲ့ ဆုံမိတယ်​။ ကျွန်​​တော်​ဆိုင်​​ရှေ့​ရောက်​​​တော့ မိခင်အို​တစ်ဦး​နဲ့ ​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​ဟာ ပြောင်းဖူး​တွေ အပြည့်​တင်​ထားတဲ့ စက်​ဘီးတစ်​စီးကို နှစ်​ဖက်​ထိန်း တွန်းလာပြီး ဆိုင်​​ရှေ့မှာလာရပ်​တယ်​။ ကျွန်​​တော်​လဲ ရုံးကဖုန်းဝင်​လာတာနဲ့ သူတို့နားမှာ ရပ်​ပြီးဖုန်း​ပြော​နေမိ​တော့ သူတို့​ပြောသံကြား​နေရတယ်​။ ​ကောင်​​လေးက မျက်​လုံး​တွေ အ​ရောင်​​တောက်​ပလို့ မ​နေ့ကမှ သူတို့​ပြောင်းဖူးပို့​နေတဲ့ ​ဒိုင်​ အလုပ်​ရှင်​က ဆက်​သွယ်​လို့ရ​အောင်​​ပေးလိုက်​တဲ့ ဖုန်းအ​ဟောင်း​လေးတစ်​လုံးကို အလုပ်​လုပ်​ရင်းသီချင်း​နား​ထောင်​ဖို့အတွက်​ ဖုန်းဆိုင်​မှာ သီချင်း​လေး​တွေထည့်​​ပေးဖို့အပ်​ခဲ့ပြီး ဒီ​နေ့မှ လာရွေးကြတာလို့ သိရတယ်​။ မ​နေ့က သူတို့ဆိုင်​ကို ဘယ်​လိုအပ်​ခဲ့လည်း​တော့မသိပါဘူး သားအမိနှစ်ေ​ယာက်​စကား​တွေ​ပြောရင်း သူတို့မှာပါလာတဲ့ တစ်​ရာတန်​ နှစ်​ရာတန်​ တန်​ဖိုးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ငါးရာတန်​​ငွေအချို့ကို ​ရေတွက်​​နေကြရင်း ဆိုင်​ထဲကို ဝင်​ဖို့ရွံ့​နေကြတယ်​။ ပြီး​တော့ […]
လျှပ်စစ်မီတာခ နှုန်းထားများ မကြာမီ ပြောင်းလဲကောက်ခံမည်…
လျှပ်စစ်မီတာခ နှုန်းထားများ မကြာမီ ပြောင်းလဲကောက်ခံမည် 🗓၁၁..၀၅..၂၀၁၉ လျှပ်စစ်မီတာခနှုန်းထားများ မကြာမီ ပြောင်းလဲကောက်ခံတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတင်မောင်ဦး က ပြောကြားသည်။ နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးတွင် မေ ၉ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ပြည် ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန တို့က နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့အတွက် တတိယတစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် မီဒီယာများ၏မေးမြန်းမှုကို ၎င်းက ယင်းကဲ့သို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “မကြာခင်မှာတော့ ဓာတ်အားခပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ဘတ်ဂျက်က ပြောင်းရပါတယ်။ စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာဆိုတော့ အဲဒါကို ချင့်ချိန်နေကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ မကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးကြေညာသွားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်” ဟု အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် […]
၁၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး မနန္ဒာထွန်းရဲ့ ရင်နင့်စရာ ဖြစ်ရပ်….
၂၀၁၉-ခုနှစ် မေလ(၇)ရက် ညနေ(၆)နာရီအချိန်ခန့် ရဲအုပ်ခင်မောင်ထွေး စခန်းမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် စစ်​ကိုင်းတိုင်း ကန့်​ဘလူခရိုင်​ ဇီးကုန်းဆေးရုံတွင် ဓါတ်လိုက်သေဆုံးသည့် အမျိုးသမီး(၁)ဦးအလောင်း ရောက်ရှိနေကြောင်း ဖုန်းဖြင့်အကြောင်းကြားချက်အရ ရဲအုပ်ခင်မောင်ထွေးနှင့်အဖွဲ့ မှ သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ ဇီးကုန်းမြို့ ၊ လက်ဆည်ကျေးရွာနေ (ဘ)ဦးစန်းလွင်(မိ)ဒေါ်အေးအေးမာတို့၏သမီး မနန္ဒာထွန်း အသက်(၁၃)နှစ် (၇)တန်းကျောင်းသူဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မေလ(၇)ရက် ညနေ(၅)နာရီအချိန်ခန့် မနန္ဒာထွန်းသည် နေအိမ်အောက်ထပ်ရှိ ခုံတန်းလျားအပေါ်တွင် ရေထည့်ထားသည့် ဇလုံအတွင်းရှိပဲများအား တစ်ဦးတည်းထိုင်၍ညှစ်နေရာ ၎င်း၏ဘေးတွင် ဖွင့်ထားသောပန်ကာသည် တိတ်ပတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ နီ/နက်ရောင် ဝါယာကြိုးအဆက်အား ရေစိုနေသည့်လက်ဖြင့် ထောက်မိပြီး…. လဲကျသွားသည်ကို တစ်အိမ်တည်းနေ အစ်ကိုဖြစ်သူ တရုတ်ကြီး(ခ)ထွန်းလွင်ဦးမှ တွေ့မြင်ရသဖြင့် အဒေါ်ဖြစ်သူ ဒေါ်ကြည်ရွှေခေါ်ကာ သတိလစ်နေသည်ထင်၍ နှိပ်နယ်ပေးပြီး ဆေးရုံသို့ချက်ချင်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရာ ဆေးရုံရောက်ရှိမှသာလျှင် ညီမဖြစ်သူ မနန္ဒာထွန်းသေဆုံးနေသည်ကို သိရှိရကြောင်း… […]
ဘဏ်စာအုပ်ထဲတင် သိန်း ၅၀၀ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်….
အလိမ်ခံရတာ တွက်မိပြီ KBZ မုံရွာဘဏ်ပါ တစ်ခုခြင်းရှင်းပြပါ့မယ် ဒီဘဏ်စာအုပ်ဟာ ATM ချိတ်ထားခြင်း လုံးဝမရှိပါဘူး ပထမဆုံး ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ မှာ ငွေသိန်း ၂၀၀ စသွင်းတယ် နောက် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက် ၂၀၁၇ မှာ သိန်း ၅၀၀ သွင်းတယ် …. နောက်ထပ် ဇန်နဝါရီ ၁၈ ၂၀၁၈ မှာထပ်သွင်းတယ် အဲ့တာတွေထားပါ အဓိက ပြောချင်တာက ငွေသွင်းတဲ့လတွေက လပေါင်းများစွာကွာတယ်….. လိမ်ချင်တယ်တဲ့သူက ဒီအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေမှာ ….နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘက်က မှားတာက အောက်တိုဘာ ၁ ရက် ၂၀၁၈မှာ သိန်း ၉၀၀ ကျော် တံဆိပ်ထုတဲ့အခါ …. ဘဏ်ကတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရဲ့ လတ်မှတ်မပါကတည်းက စပြောခဲ့ရမှာ […]